တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကသင်၏ကုမ္ပဏီကိုဘယ်လိုသတ်သလဲ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 17, 2010 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2011 Douglas Karr
ယနေ့ညငါသတ္တုတွင်း၏ဆရာနှင့်အတူအပူဆွေးနွေးမှု၌ရှိ၏။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ငါအပူ ... မဟုတ်ဘဲဆရာ;); ဆွေးနွေးမှု၏အဓိကအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးစိတ် ၀ င်စားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာ၎င်းတို့သည်ဖြစ်သည် မပို့ဘူး သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်၏ဂတိအပေါ်။ သူ၏အငြင်းအခုံမှာသူနှစ် ဦး စလုံးယုံကြည်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည် အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကသြဇာ၏မျက်စိဖမ်းယူအတွက်အောင်မြင်သောပါပြီ။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတော်တော်လေး overrated ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်သင့်ပါတယ် အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သောသင်၏ရည်မှန်းချက်သည်ဖြစ်သင့်သည် အသုံးဝင်သော။ ဗီဒီယို - မှ 37 အချက်ပြ, Jason တီထွင်မှုအပေါ် Fried
သင်၏ခေါင်းပေါက်ကွဲပြီး ... အသုံးဝင်သော နိုင် ဆန်းသစ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုတာကအမြဲတမ်းဒါကိုမဆိုလိုပါဘူး အသုံးဝင်သော။ ငါတို့ပြောသောကုမ္ပဏီသည်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စုစည်းခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အခြေခံအဆောက်အအုံများရှိသည့်ခိုင်မာသောခိုင်မာသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာစာရေးဆရာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို၎င်းကိုထည့်သွင်းပါ။ သူတို့ကအလွယ်တကူထုတ်ဝေနိုင်သည်။
ပြTheနာမှာအကြောင်းအရာမှာမကြာခဏဖြစ်သည် optimized မဟုတ်ပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှစနစ်တကျရည်ညွှန်းနိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချပေးသည့် optimization တွင်ကြီးမားသောကွာဟချက်များရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ် အသုံးမဝင်ဘူး.
ကုမ္ပဏီမှ SEO ကုမ္ပဏီများနှင့်အခန်းထဲထည့်သောအခါရုန်းကန်နေရကြောင်းကျွန်ုပ်ဆရာက ၀ န်ခံခဲ့သည်။ သေချာတာပေါ့၊ သူဘာကြောင့်အံ့အားသင့်တာလဲ သင်၏ပလက်ဖောင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အခြေခံကျသည့်အချက်အချို့ကိုသင်မပျောက်ဆုံးပါကအတွင်းပိုင်း SEO အတွက်ရောင်းအားကိုအချိန်တိုင်းဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်။ သူတို့လုပ်သင့်တယ်။
ကုမ္ပဏီ၏အာရုံစိုက်မှုမှာ webinar တစ်ခုကျင်းပရန်နောက်လာမည့်အနုပညာပြခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့်ကြုံတွေ့ရမည့်လုပ်ငန်းခွင်ခေါင်းဆောင်၊ စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်စာရေးသူ၊ အကျိုးသက်ရောက်စေသောငွေကြေးပေးဆပ်သူသို့မဟုတ်အလားအလာကိုဖော်ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ဖြစ်သည်။ ကျနော့်ရဲ့ရိုးရိုးသားသားထင်မြင်ချက်အရ၊ ဒီနည်းဗျူဟာအားလုံးဟာအချိန်၊ ငါကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး disservice လုပ်နေတာ ... ထိုသို့ပေးဆောင်ထင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအရောင်းအ ၀ ယ်မှာသူတို့မျှော်လင့်ထားတာနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး အသုံးဝင်သော.
ရလဒ်အနေနှင့် ၄ င်းတို့၏ကုမ္ပဏီသည်အခြားကျန်းမာသောကုမ္ပဏီများနှုန်းဖြင့်ကြီးထွားလာခြင်းမရှိပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၎င်းတို့၏ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့များသည်မကျေနပ်မှုများ၊ ၀ န်ထမ်းများလည်ပတ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုတိုင်းသည်ပြproblemsနာအသစ်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုဖန်တီးနိုင်သည့်ပိုမိုဆန်းသစ်သောစွမ်းဆောင်ချက်များပါရှိသည်
ဤအချက်များအားလုံးသည်ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေသည်။ ငါကုမ္ပဏီအတွက်မယုံနိုင်စရာအလားအလာမြင်ပေမယ့်ငါကုမ္ပဏီများပလက်ဖောင်းကိုတွန်းအားပေးရန်တွန့်ဆုတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ပြန်ရပြီးတာနဲ့ အသုံးဝင်သောငါသူတို့ကြီးထွားမှုအတွက်ပေါက်ကွဲလိမ့်မယ်သေချာသည်။